जो अब रियलमा हैन रिल लाइफमा मात्र हामीसंग हुनेछ: नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको २५ बर्षे अभिनय यात्रा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
जो अब रियलमा हैन रिल लाइफमा मात्र हामीसंग हुनेछ: नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको २५ बर्षे अभिनय यात्रा
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०७१, आईतवार
२०४५ सालमा बनेको ‘भुमरी’ सिने मामा एउटा सानो भूमिका खेलेर श्रीकृष्ण श्रेष्ठले नेपाली सिनेनगरीमा पाइला हालेका थिए। त्यसपछि हिरोको साथीको भूमिकामा ‘कसम’ सिनेमा खेले। उनी नेपाली सिनेमामा उनले अंकल भन्ने गरेका हेभी इक्विपमेन्टका प्रेम श्रेष्ठमार्फत छिरेका हुन्। प्रेम श्रेष्ठले श्रीलाई आइडियल क्रियसनका सुन्दर श्रेष्ठको माध्यमबाट कलाकार मोहन निरौलालाई चिनाइदिएका थिए।
उनै मोहन निरौलाले एकैपटक ठूलो भूमिका त दिलाउन सकिँदैन भन्दै चेतन कार्कीको निर्देशनमा बनेको सिनेमा ‘भुमरी’मा तीनचार सिनको सानो रोल दिलाइदिएका थिए। त्यसपछि उनै मोहनले राजेश हमालको मुख्य भूमिका भएको ‘कसम’ सिनेमामा हिरोको साथीको भूमिकामा अर्को सानो रोल पनि दिलाइदिए। त्यसको केही समयपछि केशव भट्टराई (अहिले निर्माता) श्रीको साथमा अर्का निर्माता राजेन्द्र थापालाई लिएर आफूलाई हिरो र श्रीलाई भिलेन भन्दै सिनेमाको प्रस्ताव लिएर मोहन निरौलाकहाँ पुगे। यसरी श्री ‘पुकार’मा मुख्य खलनायकको रूपमा सिनेमामा देखिए।
‘पुकार’को सुटिङ चलिरहँदा निर्माता छवि ओझा र चिरञ्जिवी आफ्नो सिनेमाका लागि हिरो खोज्दै मोहन निरौलाकाँहा पुगे। मोहनले श्रीलाई देखाइदिए। छवि ओझा सम्झन्छन्, ‘नाच्न पनि जान्ने, फाइट पनि राम्रो गर्ने साथमा अभिनय पनि। हामीले श्रीलाई ओके गर्यौं।’ यसरी भिलेन भएर सिनेमा खेलिरहेका श्री चौथो सिनेमा ‘नाता’मा २०४९ सालमा फिल्मको हिरो बने। छविले श्रीलाई फेरि २०६० सालमा ‘अजम्बरी नाता’मा दोह्राए।
मोहन निरौलाका अनुसार फिल्ममा प्रवेश गर्नुअघि श्रीले एकेडेमीमा ‘रामलीला’ नामकको नाटकमा अभिनय गरिसकेका थिए। त्यतिबेला सिनेमा खेल्ने नायकहरू नाच्नमा फितलो नै थिए। त्यो अभावलाई श्रीले पूर्ति गरिदिए। उनी राम्रो नृत्य गर्ने नायकमा दरिए। उनी नेपाली सिनेमामा बुढो बाघको उपाधि पाएका वरिष्ठ निर्देशक प्रकाश थापादेखि आफ्नो अन्तिम सिनेमाका निर्देशक आकाश अधिकारीसम्मको प्रिय अभिनेता बने। बीए पास गरेका श्रीकृष्ण पढेलेखेका सीमित नेपाली अभिनेतामध्ये एक थिए।
करिब सयभन्दा बढी सिनेमा खेलेका श्री धेरै बक्स अफिस हिट दिने नायकमा पर्छन्। आफन्त, आफ्नो मान्छे, ए मेरो हजुर, हामी तीन भाइ, सुख दु:ख, कहाँ भेटिएला आदि उनका सफलमध्ये केही चलचित्र हुन्। उनी कहिल्यै कुनै लफडा र विवादमा फसेनन्। काम गर्ने सहकर्मी नजरमा श्री एक सहृदयी र मिलनसार व्यक्ति थिए।
श्रीसँग करिब आधा दर्जन सिनेमामा सँगै काम गरेकी नायिका झरना थापाका अनुसार उनी काम गर्न अत्यन्तै सजिलो अभिनेता हुन्। ‘उहाँसँग काम गर्न कहिल्यै गाह्रो भएन। उहाँ सधैँ सबैसँग सहज मान्छे हो। मैले उहाँसँग सिनेमामा बाहेक देशविदेशका थुप्रै कार्यक्रमहरूमा काम गर्दाको अनुभव हो यो,’ सेतोपाटीसँग झरनाले भनिन्।
सिनेमामा विशेषगरी नायिका निरुता सिंह तथा झरना थापासँगको उनको जोडी जमेको थियो। सिनेमामा उनको सहकार्य छ महिनाअघि बितेका शिव रेग्मीसँग निक्कै राम्रो थियो। सिनेपत्रकार शान्तिप्रियका अनुसार श्री नेपाली जनजीवनसँग नजिक रहेका सिनेमामा बढी सफल रहे।
श्री २०६९ सालमा ‘कहाँ भेटिएला’ बाट निर्माता बने। व्यापारिक सफलतासँगै जीवनसाथीका रुपमा नायिका श्वेता खड्कालाई पनि भेट्टाए। सिनेमाले निक्कै राम्रो व्यापार गर्यो।
त्यसैबाट हौसिएका श्रीले आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा ‘कोहिनूर’ बनाएका हुन्। श्री ‘कोहिनूर’को भव्य रेड कार्पेट प्रिमियर गर्न चाहन्थे। असार २३ गते बिहेपछि हनिमुनका लागि इन्डिया गएका उनी बिरामी परेपछि दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा भर्ना भए। सिनेमाको रिलिजसम्म नेपाल फर्किने उनको इच्छा थियो। आफू सिनेमाको रिलिजमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि अस्पतालको शय्याबाटै दर्शकलाई सम्बोधन गर्दै सिनेमालाई माया गरिदिन अनुरोध गरिएको अडियो सन्देश पठाएका थिए।
उनी बिरामी परेपछि पनि उनले सिनेमाको रिलिज डेट सारेनन्। प्रख्यात बलिउड अभिनेता राज कपुरले ‘जोकर’ सिनेमामा ‘द सो मस्ट गो अन’ भनेजस्तै सिनेमा घोषित मितिमै लगाउन प्रतिबद्ध देखिए। दुर्भाग्य, सिनेमा रिलिज भएको दोस्रो दिनमा श्री यो संसारबाट कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भए।
‘एक्टर नेभर डाइज, दे लिभ इन देयर क्यारेक्टर!’ बिदा श्रीकृष्ण!
लेख साभार: सेतोपाटी. कम / तस्विर तथा डिजाइन : रमेश अधिकारी- असनेपाल न्युज
असार २१, काठमाण्डौं । खुशीको कुरा हो कि नायिका निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेषवाकर बितको लामो प्रेम सम्बन्ध […]